Zvikamu zvekudzivirira mumusika wemasheya gore rino | Ehupfumi Zvemari
Kunyangwe hazvo equities dziri kuita zvakanaka kwazvo, hazvina kukosha zvakanyanya kuti kururamisa mukota yechipiri yegore kunogona kuve kwakakosha kwazvo. Kusvika padanho rekuti inogona kukonzera zvakakomba vadiki nepakati varimimi vakatora zvinzvimbo mukati megore rino razvino. Ichi chikonzero chakakodzera kuratidza kuti varipo dzinotyisa zvikamu zvemasheya kupfuura vamwe uye nekudaro inofanirwa kudzivirirwa pasi pezvese zvingafungidzirwa.
Iko, kana zvikaitika kurasikirwa kwekukoshesa pamisika yekutengesa, hapana mubvunzo kuti vanogona kunge vaine kuita kwakaipisisa pane kumwe kuchengetedzwa. Ndekupi pasina nguva kwauchazofanira kuve wakamira nekuti njodzi dzakanyanya kwazvo. Kusvika pakuti inogona siya ma euro mazhinji munzira uye aya ndiwo mamiriro anofanira kudzivirirwa chero zvodii. Kunyangwe pakupera kwezuva zvese zvinoenderana nezvichaitwa kwekupedzisira pamisika yemari yemwedzi iri kuuya. Mune iyo maonero asiri akanaka kwazvo panguva ino.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti parizvino pane zvimwe zvikamu zviri munyatso kumusoro kumusoro. Nepo vamwe vari mukupesana, ndiko kuti mumamiriro ekunze uye izvo zvinogona kuona izvo izvo ingave yakanaka yekutengesa stock inoitwa kana kwete. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi iyo inogona zvakare kuona kukosha kwechitoro kukosha. Chero zvazvingaitika, zvichave zvakakosha kuti utarise zvirevo zvinotakura njodzi zvakanyanya kuti zviparadzanise kubva kune yedu inotevera portfolio portfolio kwenguva pfupi nepakati.
1 Zvikamu zvekudzivirira: matekinoroji matsva
2 Mabhangi, zvirinani kwete
3 Magetsi: vamuka zvakanyanya
4 Makambani anotenderera: ivo vanorasikirwa
5 Kutaurirana kunowedzerwa
Zvikamu zvekudzivirira: matekinoroji matsva
Chikamu chetekinoroji nyowani chave chimwe chezvakanyanya kukosheswa mumwedzi mitanhatu yekupedzisira uye nekudaro zvinoda makuru ekugadzirisa. Kunyanya kana paine shanduko mune zvinoitika mumisika yepasi rose yemari. Kusvika padanho rekuti iri kirasi remitengo rinogona kudzikira pamativi uye nekudaro pane mari yakawanda yaunogona kurasikirwa pavari. Zvirokwazvo, hazvina kukodzera kuzvimisikidza iwe mune izvi zvine hukasha zvirevo zvakakwira zvakanyanya mukupisa kwekupedzisira kwekupedzisira mumusika wemasheya.
Rombo rezvido zvako nderekuti muSpanish equities kune mashoma kwazvo kuchengetedzeka kweaya maitiro uye nekudaro hauzoyedzwe kutora chinzvimbo mavari. Iko iyo volatility Hapana mubvunzo kuti inoumba imwe yemadinominesheni avo akajairika sezvo paine musiyano mukuru pakati pemitengo yavo yepamusoro nepashoma. Sezvauri kuona mumachati emwedzi ichangopfuura uye kuti yakagadzirirwa seimwe yematambudziko akakosha kuti iwe uzarure zvinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi. Chero zvazvingaitika, zvirinani kuti urege marudzi aya ekutengesa mumusika wemasheya.
Mabhangi, zvirinani kwete
Kunyangwe kudzikira kwekukoshesa kwemabhangi nemapoka emari, hazvisi zvishoma zvine chokwadi chekuti rino rinoratidzika kunge risiri gore rakanaka kuchikamu futi. Hazvishamisi kuti kune kusahadzika kwakawanda kunorema pane aya akakosha kukosha mune chero mari inoshanduka pasi rose. Uye uko maonero anotaridza kuti vanogona kuramba vachirasikirwa nenzvimbo nekuda kwezviitiko zvinoitirwa masangano ekubhengi. Usafurirwa mitengo yakaderera iyo yavanobata nayo panguva ino nekuti iwe unozogona kunyatsozviona nemitengo yakanyanya kugadziridzwa kumutemo wekugovera uye wekuda.
Nepo pane izvo zvinopesana, hazvigone kukanganwika kuti ichi chikamu chemasheya chisiri kuenda kuburikidza nekunakisisa kwenguva dzayo. Kwete zvishoma. Iyo inokanganiswa zvakanyanya nekuiswa kwe yakaderera kwazvo mitengo yemitero munzvimbo ye euro sezvo muganho wayo wepakati mukupa zvikwereti zviri pachena zvishoma. Nedonhwe rinotaridzika mubairo mumhedzisiro yemakota mashoma anotevera uye izvo zvinogona kutora mitengo yavo kusvika kumatunhu akaderera pane zvavari kuratidza panguva ino chaiyo. Kunze kwemamwe marudzi ehunyanzvi kutariswa uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Magetsi: vamuka zvakanyanya
Icho chikonzero chekusatora chinzvimbo mune ino chikamu chemari chakapesana zvakanyanya neicho chemabhangi. Mune mamwe mazwi, yakakoshesa zvikuru mumwedzi mitanhatu yadarika uye ivo vari kutotaridza pachena zviratidzo zvekuneta mumisika yemari. Haisi nguva chaiyo yekutora zvinzvimbo, ndoda kana wasvika pamitengo yepamusoro yegore. Ehezve, iwe watosvika, zvinotora nguva kuita kuti kuchengetedza kubatsire kuburikidza neizvi zvakakosha pamabhegi. Kunyangwe zvake govanisa goho iyo ndeimwe yepamusoro-soro, ine kufarira kwakatenderedza 6%.
Kune rimwe divi, zvinodawo kusimbisa zvakajeka kuti izvi chikamu chakarongedzwa Uye ichi chinhu chinogona kukukuvadza iwe kubva ikozvino zvichienda mune zvako zvaunofarira. Nekuti inogona kupomera matanho angatorwa nehurumende itsva mumwedzi iri kuuya. Kunyanya mushure mekunge vasvika kumatanho avakasvika mune ino chikamu chegore. Nepo chimwe chikamu chinofanirwa kutariswa chiri icho chinoreva kugadzikana kwayo kukuru panguva yekunyora. Naizvozvo, haufanire kutarisira kuwedzera kukuru kubva panguva chaidzo idzi.
Makambani anotenderera: ivo vanorasikirwa
Muchiitiko chekuti kudzikira kwehupfumi hwenyika dzepasi rose kuchasimbiswa, hapana mubvunzo kuti tsika dzekufamba dzichava imwe yeakanyanya kurova panguva yekumisikidza mitengo yavo. Ivo vanowanzo kukura kudonha kwakakura munguva dzino uye kuti mune dzimwe nguva dzekutengesa dzinogona kuve dzakakura kupfuura 5%. Haisiyo nguva yekuve mune ino kirasi yekuchengetedzeka nekuti imari yakawanda iyo iwe yaunogona kurasikirwa nayo kubva izvozvi zvichienda mberi. Uye zvishoma kwazvo kuwana, sezvakaitika munguva dzakapfuura izvo zvinofanirwa kukubatsira iwe kuva wakangwarira kupfuura pakutanga.
Ma cyclical masheya, kune rimwe divi, anowanzo kuvandudza mafambiro ane mhirizhonga munguva yekushomeka kwehupfumi uye chinhu ichi hachigone kukanganikwa kugadzirisa yako inotevera yekudyara portfolio. Eheka hazvibatsiri mumavhiki anoKana zvisiri, pane kudaro, hazvigone kutongwa kunze kuti mitengo yavo ichawa kana paine kusimbiswa kwenyika nyowani yehupfumi hwenyika. Semuenzaniso, mukuchengetedzwa kwekukosha kweAcerinox kana Arcelor Mittal iyo inoratidza kusagadzikana kukuru mumamiriro ezvinhu aya.
Pasina chero nguva kuve kubheja kwakajeka kuita kuti iro rinowanikwa mari ribatsire sezvo isiri nguva yakakodzera kutora zvigaro mukati mezvino mamiriro. Kunyangwe iwe uchigona kuve neapo neapo muyedzo wekuvhura zvinzvimbo mune mamwe eakakosha tsika. Mupfungwa iyi, zvinogona kutaurwa usingatyi kukanganisa kuti wakanonoka kutora chinzvimbo panguva ino yezuva. kutenderera kwehupfumi. Kune rimwe divi, mune dzakawanda zviitiko vakatosvika pamitengo yavo uye pane zvishoma zvishoma mukana wekutenda wavanazvo izvozvi. Iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekumirira chiitiko chiri nani. Kana iwe usiri kuda chero kumwe kushamisika kwakashata mumwedzi mishoma inotevera uye izvo zviri kusahadzika zvinogona kupihwa. Sezvo zvinongedzo zvechikamu zviri kuratidza. Zvirinani kuve uri mukutarisa.
VeSpanish Stock Exchange vakatengesa mamirioni emamiriyoni makumi matatu nemazana matanhatu nemakumi masere neshanu mumari inoshanduka munaKurume, inova 34.680% kupfuura muna Kukadzi uye 7,2% pasi pemwedzi mumwe chetewo gore rapfuura. Kuwanda kwekutaurirana yakakura 12,5% ​​kana ichienzaniswa naKukadzi, inosvika pamamirioni 3,1, 17,8% kuderera pane munaKurume 2018. Pane imwe yedhata inonyanya kukosha ndeye iyo inoreva kuti kutengesa mune ramangwana pazvikamu mumakambani emunyika kunowedzera ne69,8, 35% mukota uye yeiyo Ibex Futures 54 Dividend Impact, neXNUMX%. Zvinoratidza kuti ichi chiri kutanga kwakanaka kwegore kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
Kusvika parizvino, purofiti yemusika wekuSpain wemari iri mumadhijiti maviri kunyangwe hazvo maitiro ehupfumi ari mu maitiro ekutaura zvakajeka. Ichi chikonzero chakarasisa chikamu chakanaka chevamiririri vemisika yemari vasinganzwisise kuti musika wemasheya ungakwire sei panguva ino. Naizvozvo, ivo vanokurudzira kungwarira kwakawanda kubva ikozvino zvichienda sekucheka kwemitengo yezvikamu kunogona kuve kwakakosha kwazvo. Uye kubva kune varimari vashoma nepakati varimari vari muchimiro chemari yakazara vanogona kutora mukana. Mune mamwe mazwi, kunze kwemisika yemari, ingave yenyika kana kunze kwemiganhu yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvikamu zvekudzivirira mumusika wemasheya gore rino
Yakagadziriswa-rateti mogeji inoderedza yavo yemitero mu2019